Lori Loughlin ma u dagaalameysaa inay gabdhaheeda uxiiso? - dadka - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Lori Loughlin ma u dagaalameysaa inay gabdhaheeda uxiiso? - dadka
Lori Loughlin ma u dagaalameysaa inay gabdhaheeda uxiiso? - dadka
Lori Loughlin iyo ninkeeda Mossimo Giannulli, xiddigii hore ee "Full House," ayaa go'aansaday in aan u dhali xeer federaalka kuwaas oo helay dacwado halis ah iyaga ka gees ah in fadeexadii musuqmaasuq badan ee jaamacadaha, taas oo keeni karta sano oo xabsi ah.
Lori Loughlin ayaa ka tagay garsooraha Mareykanka John Joseph Moakley bishii April 3, ka dib markii uu maxkamad u muuqday si uu uga jawaabo eedeymaha ka soo baxay fadeexadda jaamacadda. (Sawir Sawirle Paul Marotta / Getty Images)
Monday labada lamaane ayaa ku dooday inaysan dambiile ahayn ka hor maxkamadda fadaraalka federaalka ee Boston, waxay ka duwan tahay Felicity Huffman iyo 13 waalidiin hodan ah kuwaas oo ka codsaday kiiskooda todobaadkii hore ] si looga fogaado xukunnada xabsiga ee dheer
Sida laga soo xigtay wargeysyada, Loughlin iyo ninkeeda naqshadeeye ayaa doortay istaraatiijiyad sharciyeed, ugu yaraan marxaladdan geedi socodka.
Marka ugu horeysa waa in Loughlin iyo Giannulli ay dareemeen in ay "dooran lahaayeen" laakiin in aysan qiran dembiga, ka dib Loughlin lahaa "diiday", waxay diideen heshiis qoraal ah oo hore, iyada oo u maleynaysa inay "xad-dhaaf" ka dhigi karto oo ay ka ilaalin karto waqtiga xabsiga, ilo xogeed ayaa u sheegay E! News. Lamaanayaasha ayaa lagu eedeeyay inay bixiyaan lacagta 500 000 ee laaluushka si ay ugu noolaadaan gabdhahooda iyaga oo jooga Jaamacadda California ee Koofurta California, iyada oo ay ka mid yihiin ciyaartoyda isboortiga.
USC waxay ku faantaa heerka aadka loo doortay ee 13%. Sida laga soo xigtay dhaarta gudbiyay oo lagu taageerayo eedeymaha, mana Olivia Jade, 19 sano, mana Isabella, 20 sano, waxay ahaayeen xubno ka tirsan kooxda shaqaalaha dugsiga diyaarinta arday ay Los Angeles ama ayaa sidoo kale loo yaqaano in ay leeyihiin ayaa ka qayb qaatay cayaarahan.
Loughlin, sano 54 Giannulli, 55 sano, ayaa go'aansaday inuu "rogo laadhuuga", il u sheegay majalada Dadka, taas oo ugu dambayntii lagu soo rogay eedeeyay ka sii daran musuqmaasuq iyo lacagta la dhaqay lagu eedeeyay ku lug kasta Xukunka ugu badan ee 20 xabsi sano ah - ama Wadar ahaan, sida lagu sheegay warbixinno, afartan sano ee ugu dambaysay.
"Tani waxay noqon kartaa busto xun," ayaa laga soo xigtay dadka. "Hadda xaaladoodu way ka sii daran tahay sidii hore."
"Waxaan qabaa in iyada iyo qareenkeeda ay hoos u dhigeen dhiirigelinta dacwadaha," ayaa lagu daray ilo kale. dadka . "Sidaa daraadeed ma aysan sheegin, ka dibna waxay ku dhufatay eedeymaha kale" heshiiskaasna waa la joojiyay. "Sidaa daraadeed doorashada kaliya ee ay u baxeen waa inay qiraan dambiga."
Laakiin Loughlin iyo Giannulli waxaa laga yaabaa inay leeyihiin sabab kale oo ay rumaysan yihiin in aysan laheyn wax doorasho ah laakiin ay isku difaacayaan naftooda: Loughlin wuxuu aad uga walaacsan yahay nooca uu yahay qirasho. wuxuu sameyn lahaa gabdhahooda, "kuwaas oo aan fahmi karin wax kasta oo socda," ayaa yiri source dadka .
Sources ayaa u sheegtay Dadka in Loughlin uu ka walaacsan yahay in Olivia Jade iyo Isabella Giannulli ay ka fekerayaan wax ka yar
Loughlin wuxuu ku dhowaan lahaa labadiisa gabdhood. Taasi waa in la yiraahdo, illaa dhow, markii wararka fadeexada ka tagay Olivia Jade Giannulli, waxay ka xanaaqday dhibaatada ay u geysatay xirfadeeda saameynta ku leh shabakadaha bulshada iyo YouTuber. Olivia Jade ayaa la jahwareersanaa fadeexad kadib markii ay ogaatay in ay daabacday shaashado ka hor fadeexad, taas oo ay ku sheegtay in aysan daneynin tacliinta ama jaamacadda. Olivia Jade oo lagu eedeeyay inay cambaareeysay waalidkeed si ay "u burburiso" mustaqbalkeeda.
"Haa, (Lori) waxay ka fekereysaa aragtida dadkeeda, laakiin maaha wax la barbar dhigo waxa ay gabdhaheeda ka fekereyso," ayuu u sheegay dadka. "Sidaas darteed waa wax dabiici ah u horseeday in uu wax ka qabato."
Isabella Giannulli, Lori Loughlin iyo Olivia Giannulli ayaa ka qaybgalay abaalmarinta 2017 Teen Choice Choice ee Xarunta Galen bishii August 13 2017 ee Los Angeles, California. (Sawirka Frazer Harrison / Getty Images)
Haddii taasi dhacdo, Loughlin waxay u muuqataa mid ka werwersan tahay in gabdhahoodu ay ka yaryihiin wax ka yar haddii ay qaadato mas'uuliyadda ah in la sameeyo wax la yiraahdo sharci darro halkii ay ka geli lahayd dembiyada la sheeganayo.
Mid ka mid ah khabiirka sharciga ayaa sharraxaya sababta saddexaad ee uu Loughlin iyo ninkeedu u doortay inay iska difaacaan eedeymaha halkii ay ka geli lahaayeen wada xaajoodka sida waalidka kale. Wareysi lala yeelanayo laga bilaabo Los Angeles Times Qareenka difaaca Lara Yeretsian ayaa soo jeediyay in dacwadaha ka dhanka ah qaar ka mid ah waalidiinta aan laga yaabo inay yihiin kuwa ay u maleynayaan inay yihiin slam-dunk.
Ayuu yiri Yeretsian
Difaaca ayaa waxaa lagu wadi doonaa William "Rick" Singer, oo ah la taliye u qaabilsan qaabilaadda qaabilsan jaamacadda, oo qirtay dembi badan oo la xidhiidha nidaamyo kala duwan oo laaluush ah oo uu u adeegsaday si uu u helo carruurta ugu nasiib badan. waalidiinta jaamacadaha Mareykanka ee leh sumcad wanaagsan.
Ka dib markii baarayaasha ayaa bartay of Singer iyo qorsheyaasha lagu eedeeyay, inuu ogolaaday inuu qirto dambiga iyo iskaashi la FBI inay ku urursato cadaymaha qaaditaanka ka dhanka ah oo uu la socotay lagu eedeeyey, ay ka mid yihiin waalidiinta. Sida laga soo xigtay bayaannada ku qoran boggaga 204 ee taageeridda ashtakada asalka ah ee laga soo gudbiyey bishii Maarso, ayaa lagu soo warramey in ay sheegeen in Singer uu duubay telefoon lambar oo u diray dokumentiyo been abuur ah. emails loogu talagalay hoggaaminta FBI.
Intaa waxaa dheer, Loughlin iyo Mossimo Giannulli oo xiriirka la leh Singer, ayaa lagu qeexay eedeymaha, in ay sheegaan kaalintooda lagu soo oogay qorshaha.
Wadaxaajoodka lamaanaha la leh Singer wuxuu ka bilowday 2016 ka dib kulan ay yeesheen. iyada oo warqadda dhaarta.
Ka dib markii uu Singer u sheegay labadii gabdhood ee aqoontooda waxbarasho ee ay gabadhiisii ​​ugu weyneyd ay "ahayd qirashada USC," saddexdaas waxay ku heshiiyeen inay laaluushaan Donna, oo ah maamule ku xigeenka ciyaaraha isboortiga ee USC. Heinel, oo sidoo kale lagu soo oogay nidaamka, sida ku qoran warqadda dhaarta. Heinel wuxuu magacaabi doonaa Isabella Giannulli oo ah dukumiintiga shaqaalaha.
Loughlin iyo Mossimo Giannulli ayaa soo noqnoqda fadeexad ku 2017 Olivia Jade, Singer weydiinaya lamaanaha si ay u bixiyaan "shot tallaabo" muujinaya lahaa Olivia Jade sawir oo u oggolaan lahaa Heinel si ay u soo bandhigaan sida coxswain a
Kadib kadib Olivia Jade Giannulli ayaa warqad oggolaansho ah ka heshay USC bishii Nofeembar 2017, lataliyeyaal ka socda dugsigeeda diyaargarowga waxay muujisay walaac ay ka qabaan in labada gabadood ee jaamacadda Giannulli loo ogolaado. xubnaha shaqaalaha.
Heinel ayaa kula taliyay Singer inay u ogolaato Loughlin, Mossimo Giannulli iyo waalidiinta kale inay ogaadaan sida loo tababaro caruurtooda si ay u sharxaan astdooda ciyaaraha isboortiga ee saraakiishooda dugsiga sare.
Loughlin wuxuu dareensan yahay in ay lagama maarmaan tahay in la aado si ay gabdhaheeda ugu gudbiso USC sidii hooyo taageero wanaagsan leh, sida ay sheegtay ilo wareysi uu siiyay dadka. Tani waa sabab afaraad sababta Loughlin iyo Giannulli ay ku doodeen: Loughlin ma rumaysna in iyada iyo ninkeeduba ay dhab ahaantii sameeyeen wax qaldan, ilaha ayaa u sheegay Dadka.
"Wax yar ayay qaadanaysaa in la ogaado waxa la filayay in la sameeyo taas oo loo qaadan karo sharci darro," ayaa lagu yiri wargayska. "Labadeeda, ma ahayn dhaqan dabiici ah. Miyuu ahaa mid sax ah oo laga yaabo inuu naftiisa iska leeyahay? Waxaa laga yaabaa in. Hase yeeshee, ma aysan arkin xadgudub sharci ah.
"Bilowgii, ma dooneynin inay aqbalaan heshiis, sababtoo ah waxay dareemaysay in aysan waxba sameynin in hooyo aysan sameynin haddii ay awoodi karaan," ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. .
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) mercurynews.com
Dad: "Xaalad Degdeg ah", Jilayaasha 25 sano ka dib: sidee ayay u badaleen tan iyo markii la bilaabay taxanaha?
Dadka: Kim Kardashian ayaa ku soo laabtay sariiraha si ay u noqdaan garyaqaan
DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha Khamiis 25 April 2019 - Afrika
Dadka: Walaashii yaraa ee Jordyn Woods ayaa lagu dhibaateeyay dugsiga sababta oo ah arrinta Tristan Thompson
Yaoundé: Carruurta Siyooniga ah ee agoonta agoonta ah ayaa lagu kala saari doonaa Lyon
New Zealand Facebook ayaa ku doodaya dadka inay iibiyaan "sida"
Talyaaniga, kubada cagta ayaa wali calaamad u ah cunsuriyada
Cameroon - Job Offers95
DADKA & LIFESTYLE3,117
Daawooyinka dabiiciga ah51
DIB U EEGID AFRICAN PRESS25
Video dheeraad ah655